Amazon Alexa ichakurumidza kukwanisa kuvhura maapuro eGoogle nemirairo yezwi
Mukuda kuvandudza ruzivo rwe Alexa pane nhare, Amazon ichangobva kugonesa a chiitiko chitsva-chisina maoko paAlpha app yeApple uye Android. Asi kunyangwe iine hunyowani hutsva, Amazon Alexa haisi pedyo nekubatanidzwa nefoni dzekushandisa sisitimu Google Assistant kana Siri. Semuenzaniso, ruzivo-rwemahara rwakaburitswa nguva pfupi yadarika haruna maoko-ese, sezvo zvichida kuti iwe uvhure foni yako uye uvhure iyo Alexa app usati waburitsa izwi rekuraira. Kumwe kupfupika kwaungatarisana nako uchishandisa Alexa pafoni ndeyekuti haigoni kuvhura mapurogiramu uchishandisa izwi mirairo. Asi izvozvo zvinogona kuchinja munguva pfupi.
Maererano neshumo ichangobva kuitika kubva vava kuda, Amazon parizvino ichishanda pane chinhu chitsva cheAlpha app icho chichagonesa vashandisi kuvhura zvese zviri zviviri Android neApplo software vachishandisa mirairo yezwi. A kutarisisa kwechinhu, inonzi Alexa for Apps, yatotanga kubhururuka uye kambani iri kushanda nevanosarudza maapurera ekuwedzera mabasa ayo.
Iko kubatanidzwa kweApp kunobvumira Amazon Alexa kuti iite mabasa akaoma sekuvhura Twitter uye kutsvaga hashtag ine chete inzwi rekuraira. Mhedzisiro yacho inozoratidza pachishandiso chako, pane kuverengerwa zvinonzwika. Sekureva kweAmazon, zvakare ichaita kuti vashandisi vaite zvinhu zvakaita serekodhi vhidhiyo isina maoko nekukumbira Alexa kuti vatange TikTok uye vatange kure-isina maoko vhidhiyo kurekodha.
Amazon inotarisira kuti kubatana kwakadaro kweiyo app kunogona kubatsira Alexa kupinda parutivi neGoogle Mubatsiri uye Siri pane nharembozha, zvisinei, pane dambudziko rakakura munzira. Kubatanidzwa kweApple seizvi kunoda kutiAmazon ishandise nevanogadzira app kuti vagone kutsigira chinhu chitsva pane yavo app kana kurongazve iripo Alexa hunyanzvi hwekuita nemaitiro matsva ekuvhura. Ichi ndicho chikonzero nei Amazon parizvino irikuburitsa chinhu chitsva muchiono chechimiro, usati chazviburitsa zvakanyanya sebeta.
Pamwe chete nekubatanidzwa kweapuro idzva, Amazon yakazivisawo beta yemhando yekugona kutaura yeAI yeiyo Alexa, iyo ichaita kuti vashandisi vataure zvakasarudzika kumubatsiri, uye ruzivo kumuchina unoshandiswa kuvaka Alexa zviitiko, zvinotarisirwa gonesa nhare dzeruzivo uye dzipa zvirinani browser-based Alexa mitambo. Zvakare, iyoAmazon iri kutanga hunyanzvi hwekutangisa zvekare chimiro chinoita kuti vashandisi vambomira uye vatangezve basa, uye zvakare tarisa neWell mukufambira mberi kwebasa racho. Uye kwekupedzisira, kambani yakaratidza sebheta inonzi yakakurumidza ma link, ayo achaita kuti vanogadzira vatange kuridzira Alexa hunyanzvi kubva kunharembozha, mawebhusaiti uye kushambadzira.
Via: vava kuda